Ukuthulisa Inhliziyo Yakho Phambi KukaNkulunkulu | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
Ukuthulisa inhliziyo yakho phambi kukaNkulunkulu kungesinye sezinyathelo esibalulekile kakhulu zokungena emazwini kaNkulunkulu, futhi kuyisifundo lapho abantu bonke benesidingo esiphuthumayo sokungena kuso manje. Izindlela zokungena ekuthuliseni inhliziyo yakho phambi kukaNkulunkulu yilezi:
1. Susa inhliziyo yakho ezintweni ezingaphandle, thula phambi kukaNkulunkulu, futhi ukhuleka kuNkulunkulu ngenhliziyo egxilile.
2. Ngenhliziyo yakho ethule phambi kukaNkulunkulu, yidla, uphuze, futhi uthokozele amazwi kaNkulunkulu.
3. Zindla futhi ucabange ngothando lukaNkulunkulu futhi uzindle ngomsebenzi kaNkulunkulu enhliziyweni yakho.
Ekuqaleni qala ngodaba lomkhuleko. Gxila entweni eyodwa, futhi ukhuleka ngesikhathi esinqunyiwe. Kungakhathaliseki ukuthi ucindezelwa kangakanani, noma uxineke kangakanani, noma wehlelwa yini, khuleka nsuku zonke ngokujwayelekile, yidla futhi uphuze amazwi kaNkulunkulu ngokujwayelekile. Inqobo nje uma udla futhi uphuza amazwi kaNkulunkulu, kungabi nandaba ukuthi izimo zakho zinjani, umoya wakho uthokozile ngokukhethekile, futhi awukhathazwa abantu, izehlakalo noma izinto ezikuzungezile. Uma ujwayele ukucabanga ngoNkulunkulu enhliziyweni yakho, lokho okwenzeka ngaphandle angeke kukukhathaze. Yilokhu okuchazwa ukuba nomgogodla. Okokuqala qala ngomthandazo: Ukukhuleka unokuthula phambi kukaNkulunkulu kunemiphumela emihle kakhulu. Ngemuva kwalokho, yidla futhi uphuze amazwi kaNkulunkulu bese uzama ukuthola ukukhanya, thola indlela yokwenza, yazi ukuthi iyini injongo yamazwi kaNkulunkulu, futhi uqonde ngaphandle kokuphambuka. Ngokuvamile, sondela kuNkulunkulu ngokujwayelekile enhliziyweni yakho, cabanga ngothando lukaNkulunkulu, futhi zindla ngamazwi kaNkulunkulu, ngaphandle kokuphazanyiswa izinto zangaphandle. Lapho inhliziyo yakho isinokuthula okusezingeni lokuthi ukwazi ukucabangisisa, ukuze kuthi ngaphakathi kwakho, uzindla ngothando lukaNkulunkulu futhi usondele ngempela kuNkulunkulu kungakhathaliseki isimo okuso, futhi ugcine sufike ezingeni lapho udumisa khona enhliziyweni yakho, futhi sekungcono nakakhulu kunokukhuleka, ngakho kulokhu uyokuba nesimo senhlonipho ethile. Uma usukwazi ukuthola lesi simo esichazwe ngenhla, lokhu kuyobonisa ukuthi inhliziyo yakho inokuthula ngempela phambi kukaNkulunkulu. Lokhu kuyisinyathelo sokuqala; Kuwumzamo oyisisekelo. Kuphela ngemuva kokuba bekwazi ukuba nokuthula phambi kukaNkulunkulu, abantu bangakwazi ukuthintwa uMoya oNgcwele, futhi bakhanyiselwe, futhi bakhanyiswe uMoya oNgcwele, kulapho kuphela lapho bekwazi khona ukukhuluma noNkulunkulu ngeqiniso, futhi bekwazi ukubamba intando kaNkulunkulu kanye nokulawula kukaMoya Ongcwele—futhi kulokhu, bayobe sebengenile endleleni elungile ezimpilweni zabo ezingokomoya. Ukuzifundisa ukuphila phambi kukaNkulunkulu ukuze ufinyelele ekujuleni okuthile ukuze ukwazi ukumelana nawe ngokwakho, ukuzenyeza, bese uphila emazwini kaNkulunkulu, impela lokhu kuwukuthulisa inhliziyo yakho phambi kukaNkulunkulu. Ukwazi ukuzenyeza, ukuziqalekisa, ukumelana ngokwakho kuwumphumela ozuzwa umsebenzi kaNkulunkulu, futhi abantu angeke bakwenze lokhu. Ngakho-ke ukufunda ukuthulisa inhliziyo yakho phambi kukaNkulunkulu kuyisifundo abantu okumele bangene kuso ngokushesha. Abanye abantu ngeke nje kuphela bangakwazi ukuthulisa inhliziyo phambi kukaNkulunkulu, kodwa izinhliziyo zabo azithuli phambi kukaNkulunkulu nalapho bekhuleka. Lokhu kukude kakhulu nezindinganiso zikaNkulunkulu! Uma inhliziyo yakho ingeke yathula phambi kukaNkulunkulu, ungakwazi yini ukushukunyiswa uMoya oNgcwele? Uma ungeke ukwazi ukuthula phambi kukaNkulunkulu, ungaphazamiseka uma kukhona ofikayo, ungaphazamiseka uma abantu bekhuluma, futhi inhliziyo yakho ingasuka uma abanye benza izinto, ngakho awusiye umuntu ophila phambi kukaNkulunkulu. Uma inhliziyo yakho ithule ngempela phambi kuNkulunkulu angeke ukhathazwe yinoma yini eyenzeka ngaphandle ezweni, futhi akekho umuntu, isigameko, noma into ezothatha isikhathi sakho. Uma usungenile kulokhu, khona-ke lezo zimo ezimbi noma zonke izinto ezingezinhle, njengemicabango yabantu, ifilosofi yokuphila, ubudlelwano obungajwayelekile nabantu, kanye nemicabango esenhliziyweni yakho eyoshabalala ngokuzenzakalela. Ngenxa yokuthi uhlala uzindla ngamazwi kaNkulunkulu, futhi nenhliziyo yakho ihlala isondela eduze kukaNkulunkulu futhi igcwaliswe ngamazwi amanje kaNkulunkulu, lezo zinto ezingezinhle zisuka ngokungazelelwe. Uma ugcwaliswe izinto ezinhle, izinto ezindala ezingezinhle angeke zibe nendawo, ngakho ungazinaki lezo zinto ezingezinhle. Awudingi ukwenza imizamo ukuzivimba. Naka ukuthula phambi kukaNkulunkulu, yidla futhi uphuze kakhulu amazwi kaNkulunkulu futhi uwathokozele, cula kakhulu amahubo udumise uNkulunkulu, vumela uNkulunkulu abe nethuba lokusebenza kuwe, ngoba ngalesi sikhathi uNkulunkulu ufuna ukuphelelisa abantu, futhi ufuna ukuzuza inhliziyo yakho; uMoya waKhe ushukumisa inhliziyo yakho, futhi uma uphila phambi kukaNkulunkulu ulandela ukuholwa uMoya oNgcwele, uyomanelisa uNkulunkulu. Uma unaka ukuphila ngamazwi kaNkulunkulu futhi ube nobudlelwane obukhulu ngeqiniso ukuze uthole ukwambuleleka nokukhanyiseleka kukaMoya oNgcwele, khona-ke leyo miqondo yenkolo, ukuzenzisa kanye nokuzazisa, konke kuyonyamalala, futhi ngemuva kwalokho uyokwazi ukuthi umsebenzela kanjani uNkulunkulu, uyokwazi ukuthi umthanda kanjani uNkulunkulu, futhi umanelisa kanjani uNkulunkulu. Lezo zinto ezingaphandle kukaNkululnkulu kungazelelwe ziyobe seziyakhohleka.
Ukuzindla ngamazwi kaNkulunkulu kanye nokukhuleka kaningi ngamazwi kaNkulunkulu ngesikhathi esifanayo njengokudla nokuphuza amazwi amanje kaNkulunkulu—lesi isinyathelo sokuqala sokuba nokuthula phambi kukaNkulunkulu, Uma ungaba nokuthula phambi kukaNkulunkulu, khona-ke ukwambulelwa kanye nokukhanyiselwa nguMoya oNgcwele kuyoba nawe. Impilo yonke engokomoya itholakala ngokuncika ekuthuleni phambi kukaNkulunkulu. Uma ukhuleka kumele uthule phambi kukaNkulunkulu ngaphambi kokuba ushukunyiswe uMoya oNgcwele. Ngokuthula phambi kukaNkulunkulu lapho udla noma uphuza amazwi kaNkulunkulu ungambuleleka futhi ukhanyiseleke futhi ukwazi ukuthola ukuqonda ngempela amazwi kaNkulunkulu. Ekuzindleni kwakho okujwayelekile kanye nokuhlanganyela, futhi uma usondela kuNkulunkulu ngenhliziyo yakho, kulapho kuphela uthula phambi kukaNkulunkulu ungaba nokusondelana ngempela noNkulunkulu, ukuqonda kwangempela uthando lukaNkulunkulu kanye nomsebenzi kaNkulunkulu, nomsebenzi kaNkulunkulu, kanye nokucabangela ngempela intando kaNkulunkulu. Ngesikhathi ujwayela ukwazi ukuthula phambi kukaNkulunkulu kungesikhathi ukwazi ngokwengeziwe ukukhanyiseleka, futhi ngesikhathi ukwazi ngokwengeziwe ukuqonda isimo sakho esikhohlakele, lokho okuntulayo, lokho okumele ukufake, umsebenzi okumele uwenze, kanye nalapho unobuthaka khona. Konke lokhu kutholakala ngokwethemba ekuthuleni phambi kukaNkulunkulu, ungezwa ezinye izimfihlakalo kumoya, uthinte lokho uNkulunkulu afuna ukwenza manje, uzwe ukuqonda okujulile kwamazwi kaNkulunkulu, futhi uzwe ingqikithi yamazwi kaNkulunkulu, onke amazwi kaNkulunkulu, futhi uyakwazi ukubona indlela yokwenza ngokucacile kakhudlwana nangokunembile ngokwengeziwe. Uma ungeke uthule emoyeni wakho kuze kube ekujuleni okuthile, uzomane ngandlela thize ushukunyiswe uMoya oNgcwele, ngaphakathi kuwe uyozwa amandla, kanye nentokozo nokuthula, kodwa angeke uzwe lutho olujulile. Ngike ngasho ngaphambili, uma umuntu engasebenzisi amandla akhe onke, koyoba nzima kuye ukuzwa izwi laMi, noma ukubona ubuso baMi. Lokhu kubhekise ekutholeni ukujula phambi kukaNkulunkulu, hhayi imizamo yangaphandle. Umuntu ongathula ngempela phambi kukaNkulunkulu uyakwazi ukuzikhulula kuzo zonke izibopho zezwe futhi engathola ukugcwaliswa uNkulunkulu. Bonke abantu abangakwazi ukuthula phambi kukaNkulunkulu empeleni baba nokuzitika futhi abanakho ukuzibamba. Bonke abakwazi ukuthula phambi kukaNkulunkulu, abantu abangcwele phambi kukaNkulunkulu, abantu abalangazelela uNkulunkulu. Abantu abathule phambi kukaNkulunkulu kuphela abanaka impilo, abanaka ubudlelwano bomoya, abomele amazwi kaNkulunkulu, nabaphishekela iqiniso. Bonke labo abanganazi ukuthula phambi kukaNkulunkulu,abangazi ukuthula phambi kukaNkulunkulu, bangabantu abangenalusizo lwalutho abanamathele ngokuphelele ezweni, abangenakho ukuphila; ngisho noma bethi bayakholwa kuNkulunkulu bamane bakusho ngezindebe zomlomo kuphela. Labo uNkulunkulu abaphelelisayo futhi abenze baphelele ekugcineni bangabantu abangathula phambi kukaNkulunkulu. Ngakho-ke, abantu abathulile phambi kukaNkulunkulu bangabantu abaphiwe izibusiso ezinkulu. Abantu abathatha isikhathi esincane emini ukudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu, abagcwele izindaba zangaphandle ngokupheleleyo, futhi abanganaki ukungena ekuphileni bonke bangabazenzisi abangenalo ithemba esikhathini esizayo. Yilabo abangathula phambi kukaNkulunkulu futhi abaxhumana ngempela noNkulunkulu abangabantu bakaNkulunkulu.
Ukuza phambi kukaNkulunkulu wamukele amazwi aKhe njengokuphila kwakho, kumele kuqala uthule phambi kukaNkulunkulu. Kuphela uma uthula phambi kukaNkulunkulu yilapho uNkulunkulu ezokukhanyisela futhi akwenze uqonde. Lapho abantu bethula baphambi kukaNkulunkulu, kungesikhathi bekwazi ngokungeziwe ukuthola ukukhanyiseleka nokukhanyiselwa. Lokhu kudinga ukuthi abantu babe abalungileyo nabanokholo. Kungalokhu kuphela bengathola ukupheleliswa. Into ebalulekile ukuze ungene empilweni engokomoya ukuba uthule phambi kukaNkulunkulu. Konke ukuqeqeshwa kwakho ngokomoya kuyoba nempumelelo kuphela uma uthule phambi kukaNkulunkulu. Uma ungeke uthulise inhliziyo yakho phambi kukaNkulunkulu angeke wamukele umsebenzi woMoya oNgcwele. Uma inhliziyo yakho ithule phambi kukaNkulunkulu kungakhathaliseki ukuthi wenzani khona-ke uba umuntu ophila phambi kukaNkulunkulu. Uma inhliziyo yakho ithule phambi kukaNkulunkulu futhi isondela kuNkulunkulu kungakhathaliseki ukuthi wenzani, lokhu kubonisa ukuthi ungumuntu othule phambi kukaNkulunkulu. Lapho ukhuluma nabanye, lapho uhamba, uyakwazi ukuthi, “Inhliziyo yami iyasondela kuNkulunkulu, futhi ayigxilile ezintweni zangaphandle, futhi ngingathula phambi kukaNkulunkulu.” Lona umuntu othule phambi kukaNkulunkulu. Ungahlangani nezinto ezizosusa inhliziyo yakho iye ngaphandle, futhi ungahlanganyeli nabantu abazosuza inhliziyo yakho kuNkulunkulu. Shiya noma yini engaphazamisa inhliziyo yakho ekusondeleni kuNkulunkulu, noma suka kukho. Leyo ndlela izuzisa ngokwengeziwe empilweni yakho. Manje yisikhathi somsebenzi omkhulu woMoya oNgcwele. Yisikhathi lapho uNkulunkulu ngokwaKhe ephelelisa abantu. Uma ngalesi sikhathi ungeke wathula phambi kukaNkulunkulu, ngakho-ke awusiye umuntu obuyela phambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Uma uphishekela izinto ngaphandle kuNkulunkulu, akunakwenzeka ukupheleliswa uNkulunkulu. Labo namuhla abezwa amazwi anjalo kaNkulunkulu futhi belokhu ukuthula phambi kukaNkulunkulu bangabantu abangalithandi iqiniso, abantu abangamthandi uNkulunkulu. Uma ungeke uzinikele manje, uyozinikela nini? Ukuzinikela ukuthulisa inhliziyo yakho phambi kukaNkulunkulu. Lona umnikelo wangempela. Noma ubani onikela ngempela inhliziyo yakhe kuNkulunkulu manje, nakanjani angapheleliswa uNkulunkulu. Akukho, noma ngabe yini, engakuphazamisa, noma ngabe ukukuthena, noma ukusebenzelana nawe, noma ukuhlangabezana nokudideka noma ukwahluleka, inhliziyo yakho kumele ihlale ithule phambi kukaNkulunkulu. Kungakhathaliseki ukuthi abantu bakuphatha kanjani, inhliziyo yakho kumele ithule phambi kukaNkulunkulu. Kungakhathaliseki ukuthi iziphi izimo obhekene nazo, kungaba izinkathazo, ukuhlupheka, noma ushushiso, noma ngabe ufikelwa izinhlobo eziningi zezilingo, inhliziyo yakho kumele ithule phambi kukaNkulunkulu. Lena indlela yokupheleliswa. Kuphela uma uthule ngempela phambi kukaNkulunkulu, uyocaciseleka ngamazwi amanje kaNkulunkulu, wenza kahle ngokwengeziwe ukukhanyiseleka nokukhanyiselwa uMoya oNgcwele futhi ungaphambuki, ukwazi ukubamba ngokucace ngokwengeziwe intando kaNkulunkulu futhi ube nomgomo ocacile enkonzweni yakho, futhi ukwazi ukubamba ngokunembile kakhulu ukuhamba nokuqondiswa uMoya oNgcwele futhi ube nesiqiniseko sokuphila ngaphansi kokuqondiswa uMoya oNgcwele. Lena imiphumela etholakala ngokuthula ngempela phambi kukaNkulunkulu. Uma abantu bengacaciselekile ngamazwi kaNkulunkulu, abanayo indlela yokuwenza, angeke bazibambe izinhloso zikaNkulunkulu, noma bengenazo izimiso zokuyenza, lokhu kungenxa yokuthi izinhliziyo zabo azithulile phambi kukaNkulunkulu. Injongo yokuthula phambi kukaNkulunkulu ukufuna ngenkuthalo nangempumelelo ukulunga nokuvuleleka emazwini kaNkulunkulu, ekugcineni ukuthola ukuqonda iqiniso nokwazi uNkulunkulu
Uma inhliziyo yakho ingeke ithule njalo phambi kukaNkulunkulu, angeke akuphelelise uNkulunkulu. Uma umuntu engenaso isifiso, lokho kuyafana nokungabi nenhliziyo, futhi abantu abangenazo izinhliziyo angeke bathule phambi kukaNkulunkulu. Abazi ukuthi ungakanani umsebenzi owenziwa uNkulunkulu noma kungakanani akushoyo, futhi abazi ukuthi bangakwenza kanjani. Ingabe laba akubona yini bantu abanazo izinhliziyo? Ingabe abantu abangenazo izinhliziyo bangakwazi ukuthula phambi kukaNkulunkulu? UNkulunkulu angeke aphelelise abantu abangenazo izinhliziyo, futhi bafanelwe ukuba phakathi kwezilwane. UNkulunkulu ukhulume ngokucacile nangokuphelele, nokho inhliziyo yakho ayishukumiseki futhi awuthuli phambi kukaNkulunkulu; akusibona yini ubulwane lobu? Abanye abantu bayaduka bezama ukuthula phambi kukaNkulunkulu. Lapho kuyisikhathi sokupheka abapheki, futhi uma kuyisikhathi sokusebenza abasebenzi, kodwa bamane baqhubeke nokukhuleka kanye nokuzindla. Ukuthula phambi kukaNkulunkulu akusho ukungapheki noma ukungasebenzi, noma ukuziba impilo, kodwa ukwazi ukuthulisa inhliziyo yakho phambi kukaNkulunkulu, ukuthula phambi kukaNkulunkulu akusho ukungapheki nokungenzi imisebenzi yasekhaya, noma ukungaphili impilo yakho; kodwa, kuwukwazi ukuthulisa inhliziyo yakho phambi kukaNkulunkulu ezimweni ezejwayelekile, nokuba nendawo kaNkulunkulu enhliziyweni yakho. Kungakhathaleki ukuyiphi indawo, unendlela yokukwenza, yenza konke ongakwenza ukusondela kuNkulunkulu, yenza konke ongakwenza ukuthulisa inhliziyo yakho phambi kukaNkulunkulu. Uma izimo zivuma, khuleka ngokugxila kuwo kuphela; Lapho izimo zingavumi, sondela kuNkulunkulu ngenhliziyo yakho ngesikhathi usebenza ngezandla zakho. Lapho ungakwazi ukudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu, ngakho-ke wadle futhi uwaphuze amazwi kaNkulunkulu; lapho ungakwazi ukukhuleka, ngakho-ke khuleka; lapho ungakwazi ukucabanga uNkulunkulu, ngakho-ke cabanga Yena; yenza konke ongakwenza ukuzifundisa ukungena ngokuhambisana nendawo okuyo. Abanye abantu bengathula phambi kukaNkulunkulu uma kungekho lutho olwenzekayo, kodwa masinyane uma kuba khona okwenzekayo, imiqondo yabo iyazula. Lokho akusikho ukuthula phambi kukaNkulunkulu. Indlela ekahle yokukubona ukuthi ngaphansi kwanoma yiziphi izimo akufanele inhliziyo yomuntu ishiye uNkulunkulu, noma izizwe iphazanyiswa abantu abangaphandle, izigameko noma izinto: Lona umuntu othule ngompela phambi kukaNkulunkulu. Abanye abantu bathi lapho bekhuleka emihlanganweni izinhliziyo zabo ziyakwazi ukuthula phambi kukaNkulunkulu, kodwa lapho besenkonzweni abakwazi ukuthula phambi kukaNkulunkulu futhi imicabango yabo iyadlebeleka. Lokhu akusikho ukuthula phambi kukaNkulunkulu. Abantu abaningi manje bakuleso simo, futhi izinhliziyo zabo azikwazi ukuthula phambi kukaNkulunkulu. Ngakho nidinga ukufaka umfutho owengeziwe ekuzifundiseni kulendawo, ningene kancane kancane endleleni efanele yokwenza izinto ekuphileni futhi nihambe endleleni yokupheleliswa uNkulunkulu.
Okwedlule: Abantu Izimo Zabo Eziguqukile Yilabo Abangene Eqinisweni Lamazwi KaNkulunkulu
Okulandelayo: Yazini Intando KaNkulunkulu Ukuze Nizuze Ukuphelela